XL MIBVUNZO - MITEMO INOKOSHA NEZVAKAITIKA | FXCC
musha / XL MIBVUNZO - MITEMO INOKOSHA NEMAGWARO
XL ACCOUNT - MAZANO ANOKOSHA & ZVINOKOSHA:
Unobvumirana kuti nekubatanidzwa mukukurudzirwa uku ("Promotion"), iwe uchasungwa nemirairo iyi nemitemo ("Magwaro") pamwechete neCFDC yeCFDs Customer Agreement uye Investment Services General Conditions, pamwe chete nedzimwe dzose dzebhizimisi nemitemo iyo inoshanda pakero yako yekutengesa. Unofanirwa kuverenga Magwaro aya nekunyatsozviziva iwe chiziviso chokuzivisa ngozi.
Vanokodzera Vatengi: FXCC itsva chaipoipo Vatengi vanozarura uye vanobhadhara makero avo nemari (kana kubhadhara kwekodzero yavo) pakati pe $ 100 US uye $ 10,000 US.
Kwete Komisheni kana Swaps pane XL Maakaiti ane deposits uye / kana kuenzanisa pakati ($ 100 - $ 10,000).
Nhepfenyuro nehomwe uye / kana kuenzanisa pamusoro pe $ 10,000 ichagadzirirwa kuAtek Account uye ichava pasi peKomisheni & Swaps sezvinotsanangurwa pa webhusaiti yeFXCC pasi pe "Chikamu Chekutsvaga" chikamu.
Mutevedzeri wekusimudzirwa uku anogona kunge ane XL chete yekutengeserana (s).
Maximum Leverage yeAcler XL inobva paukuru hwebhuku sezasi:
Deposit / Equity pakati pe $ 100 ne $ 3000: Shandisa kusvika ku1: 300
Deposit / Equity pakati pe $ 3000 ne $ 5000: Shandisa kusvika ku1: 200
Deposit / Equity pakati pe $ 5000 ne $ 10,000: Shandisa kusvika ku1: 100
Maximum yekutengeserana yakaita Mutengi akakodzera anogona kuvhura chero nguva ipi zvayo haifaniri kudarika 10 mizinga yakawanda.
FXCC ichava nekodzero, pamusana pekuchenjera kwayo, kugamuchira Vatengi vanobudiswa ne3rd sangano pasi peChirongwa cheAlex XL. Zvakadaro zvakatumirwa Vatengi vanonzwisisa uye vanobvumirana kuti mari yakawanda yekutangisa ($ 5 pamiganhu yakazara) inogona kushandiswa kumabhuku avo eXL.
Chero chiratidzo chekubiridzira, kushungurudzwa kana mamwe maitiro ekunyengera kana kusvibisa mubhuku rese rekutengeserana kweMutengi, kana zvimwe zvakabatana kana zvakabatanidzwa neAcler XL zvichange zvisingabvumirwi neakaiti kubva kune zvipo zvose zvakapiwa uye / kana zvipo chero chipi zvacho zvakaitwa pasi peKurudziro ino.
FXCC inotarisira kodzero yekugadzirisa chero Account XL kana kushandura chero Account XL ku "Aunti Yese" pamusana pekuziva kwayo, pasina chikonzero chekupa chero kururamisira kana kutsanangura zvikonzero zvekumiswa kwakadaro kana kuti kuchinja.
Kusawirirana kupi zvako, kusanzwisiswa kwemashoko aya pamusoro apa kunoshandiswa kana mamiriro ezvinhu kana zvichiitika uye zvisingafukidzwi neMitemo nemigariro iyi, zvinokakavadzana kana kushandurwa zvakajeka zvichagadziriswa neFXCC nenzira iyo inofunga kuti ndiyo yakanakisisa kune vose vanofunga. Icho chisarudzo chichava chekupedzisira uye / kana kusunga kune vose vanopinda. Hapana nhaurirano ichapinda.